Ciidamada Milatariga Oo Isbadal lagu sameenayo iyo Farmaajo oo amar bixiyay | Booqasho News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home Wararka Maanta Ciidamada Milatariga Oo Isbadal lagu sameenayo iyo Farmaajo oo amar bixiyay
Ciidamada Milatariga Oo Isbadal lagu sameenayo iyo Farmaajo oo amar bixiyay
Isbadal weyn ayaa la filayaa in lagu sameeyo saraakiisha hogaamisa Ciidanka Milatariga Soomaaliya, waxaana dhawaan la howl galin doonaan saraakiil da’yar ah oo inta badan dalka dibadiisa tababaro kusoo qaatay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku amray taliyaha ciidanka Milatariga Soomaaliya in uu howlgaliyo hogaano kala duwana u magacaabo saraakiisha da’da yar ee Milatariga katirsan.
Waxa uu sheegay Madaxweynaha Soomaaliya in muhiim tahay xiligan laga faa’iido qibrada casriga ah ee leeyihiin saraakiisha da’da yar ee lagu tababaray dalka dibadiisa iyo gudihiisa loona dhiibo hogaanada ciidanka ay hada hayaan inta badan saraakiishii hore.
Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Jen/ C/wali Jaamac Gorod ayaa sheegay in iyaga oo qaadanaya amarka Madaxweynaha Soomaaliya hogaano kala duwan loo magacaabi doono saraakiisha da’da yar ee ku jira ciidaka Milatariga.
”Madaxweynaha waxa uu i amray in hogaano kala duwan loo dhiibo Saraakiil da’yar ah oo dibada wax kusoo bartay, waxaana halkan ka cadeenaya in maanta laga bilaabo saraakiisha da’da yar loo dhiibi doono hogaano kala duwan” Ayuu yiri Gen, Gorod.
Ciidanka Milatariga Soomaaliya waxaa ku jira saraakiil dhalinyaro ah oo qaarkood jaamacado kasoo baxeen, waxaana saraakiishan lagu soo tababaray wadamo kala gedisan caalamka kuyaala halka kuwa kalana gudaha dalka lagu tababaray.
Hogaanada kala duwan ee Ciidanka Milatariga Soomaaliya waxaa hada haya saraakiil hore uga tirsanaa milatarigii hore iyo Saraakiil kale oo iyana qaab qabiil wax ku noqday, waana mida keentay in Milatariga Soomaaliya uusan horey u socon.
Previous articleDaawo Sawirro):’Ciyaartoyda Xulka K/Cagta Jubbaland oo si aan caadi aheyn loogu soo dhoweeyey Kismaayo
Next articleMadaxweyne Joseph Kabila oo la gubay Guri Weyn uu lahaa yaalla gobolka Waqooyiga Kive